KULMIYE Party » Young Kulmiye Wing Young Kulmiye Wing – KULMIYE Party
HomeYoung Kulmiye Wing
KULMIYE waa xisbi siyaasi uu leeyahay Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, waxa la asaasay bishii May ee sanna…dkii 2002, ujeeddadiisu waxay tahay sidii Somaliland ay u gaadhi lahayd himilooyinkeeda ay ka midka yihiin inay ka mid noqoto dunida xorta ah ee dimoqraadiga ah.
Xisbiga KULMIYE bishii Diisambar ee 2002 ayuu ku guulaystay kaalinta labaad ee tartankii doorashooyinkii degaamada Jamhuuriyadda Somaliland, taasoo uu kaga mid noqday saddexdii xisbi siyaasadeed ee ugu horreeyey dalka ee sharci ah.
Xisbiga oo uu hoggaaminayey aasaasaha ruug-caddaaga siyaasadda Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu ka qaybgalay tartankii doorashada madaxtinimada ee ugu horreysay Somaliland ee April sannadkii 2003-dii, iyadoo uu murrashax jagada Madaxweynaha uu u tartamayey Mudane, Axmed Maxamed Siilaanyo, ku-xigeenna uu ahaa Mudane, Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax, horena u ahaa madaxweyne-ku-xigeenkii labaad ee dalka.
Haseyeeshee, doorashadaasi kumuu guulaysan xisbiga KULMIYE, waxaanna 80 cod oo keliya kaga helay xisbigii UDUB, waxaannu xisbiga KULMIYE ammaan iyo taageero fara badan ku kasbaday aqbalaadda natiijada tirada aadka u yar lagaga helay doorashada.
Doorashadii u horreysay ee xidhibaannada golaha shacabka ama Golaha Wakiillada waxa uu xisbiga KULMIYE ku guulaystay kaalinta labaad ee kuraasta aqalkaas oo uu helay 28 mudane ka mid ah 82 xildhibaan ee uu ka kooban yahay goluhu.
Xisbiga KULMIYE waxa uu hoggaaminta talada Jamhuuriyadda Somaliland ku guulaystay doorashadii 26 June 2010-kii, kadib markii uu aqlabiyad wayn ku guulaystay codadkii dadweynuhu bixiyeen. Waxaanna Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo iyo xukuumaddiisu muddadii ay xilka hayeen horumar iyo waxqabad ballaadhan ka sameeyeen guud ahaan waddanka, gaar ahaan adeegyada bulshada ee aasaasiga ah.
Doorashadii labaad ee golayaasha deegaanka Somaliland oo qabsoontay 27 December 2012-kii, taas oo ay ku tartameen 9 urur oo ay ku jiraan laba ka mid ah saddexdii xisbi ee hore oo kala ah; UCID iyo KULMIYE, waxa uu mar kale xisbiga KULMIYE ka soo hooyey guul wayn oo uu ka mid noqday saddexda xisbi siyaasadeed ee sharciga ah ee mar kale jiri kara toban sanno oo kale.